UKarlie Kloss uhamba ze kunye nemifanekiso engamanyala kunye nephonografi evuzayo - Iphonografi Yoosaziwayo
UKarlie Kloss uhamba ze kunye nemifanekiso engamanyala kunye nephonografi evuzayo
Jonga imodeli kunye neenkwenkwezi zosasazo kwezentlalo uKarlie Kloss imifanekiso enganxibanga kunye nemifanekiso engamanyala, iteyiphu yakhe evuzayo yesini apho wabonakala engenasinxibo ngelixa atyholwa yindoda yakhe! Umyeni wakhe mhlawumbi wayenomsindo, kodwa ngoku xa ethandwa kakhulu kunangaphambili, wanelisekile. Usana lwakhe luyinto exhuzulayo yamadoda amaninzi kunye neebhoners zawo ... Ngoku lixesha lokuba ubone ii-selfies ezizimeleyo zikaKariel Kloss kunye nobuso bakhe obubi!
UKarlie Kloss (oneminyaka engama-27) yimodeli yaseMelika kunye nosomashishini. Ngeminyaka eli-17 kuphela, uVogue Paris wabhengeza ukuba ungomnye 'weemodeli ezingama-30 eziphambili ze-2000s.'WayeyiNgelosi eyimfihlo yaseVictoria ukusukela ngo-2013 ukuya ngo-2015. Wayeka emsebenzini ukuba athathe iminyaka emibini eyokufunda kwiYunivesithi yaseNew York. Ngaphandle kwemodeli, uKloss unomdla kwitekhnoloji kwaye useke inkampu 'yeKode kunye neKlossy', ejolise ekufumaneni amantombazana amancinci anomdla kumabala e-STEM.
U-Kloss waba ngumphathi wechungechunge lwe-Bravo TV, iProject Runway ngo-2019. UKloss yinkqubo yekhompyutha. Ngo-2015, uKloss wabambisana neFlatiron School kunye neCode.org ukubonelela nge-scholarship ebizwa ngokuthi 'Kode kunye neKlossy' yamantombazana amancinci anomdla kwi-computer yesayensi kunye nobunjineli besoftware. UKloss waqala ukuthandana nosomashishini kunye notyalomali UJoshua Kushner Ngo-2012 batshata ngo-2019.
UKarlie Kloss wavuza iiteyiphu zesini
Kwaye ekugqibeleni nangu uKarlie Kloss kwividiyo yakhe ye-porn evuzayo, okanye kungcono ukuthi uthi itape! UKloss ubonwa edanisa phambi kwekhamera ekuqaleni aze abonise amabunu akhe ngelixa engenasinxibo… Umzimba ohamba ze uKarlie Kloss awukho kuluhlu lwam lokuxhuzula, kodwa sibona amandla kuye… Umzimba wakhe obhityileyo kunye neembambo azindenzi nzima, kodwa ezi ngono ziqinileyo ziyandiphambanisa. Emva koko usinike i-pussy yakhe ehamba ze, zonke zichetyiwe kwaye zilungele ukuthatha iqhude. Uyihlikihla kuqala, emva koko indoda yakhe ithathe ikhamera. Emva koko ufota i-dick yakhe ngaphakathi kweKarlie Kloss pussy!
UKarlie Kloss imifanekiso enganxibanga kunye neminqweno
Iimbambo ziyafuneka kushishino lwefashoni. KwiPlanethi yethu, iimbambo zicinyiwe kakhulu. Mhlawumbi abanye benu bayathanda ukubona i-skinny kunye ne-anorexic sluts, kodwa andenzi njalo! Nangona kunjalo, lixesha lokuba ubone uKarlie Kloss ehamba ze kunye nemifanekiso engenasinxibo, iboobs zakhe ezishushu ezingenanto kunye nemilenze emide. Ingelosi edumileyo ye-VS inokukwenza ube cum, kodwa nje ngezakhono ze-blowjob azibonisileyo kwikliphu evuzayo evela phezulu.
Ndwendwela enye yethu abadumileyo nudes , abahlobo bakhe abaninzi balapha!
ubusika Ariel amabele amakhulu
Ihlobo likaSusan lifota unganxibanga
I-sarah shahi sex tape
I-sigourney weaver isabelana ngesondo